भैरहवा, ६ वैशाख । मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले केन्द्रिय स्तरमा जस्तै अन्य दलले भन्दा चुनावी प्रचारलाई जिल्ला नगर र गाउँ वडा तहमा समेत तिब्रता दिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादी केन्द्रियतामा सञ्चालित एमालेले रुपन्देहीका सबै जसो स्थानीय तहमा एकल उमेदवारी उठाउने तयारी थालेको छ ।
यद्यपी त्यसको निक्र्यौल आज (बुधबार) देखी सुरु हुने एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीको बैठकले गर्नेछ । एक उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका, १० गाउँपालिका रहेको रुपन्देहीमा एमालेको सर्वसम्मत एकल उमेदवार सिफारिस भएको सिद्धार्थनगर मात्रै हो ।
कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलले उमेदवारको टुंगो समेत लगाउन नसकेकोे अवस्थामा एमाले सिद्धार्थनगरले आसन्न निर्वाचनमा हरि प्रसाद अधिकारीलाई मेयरमा उठाउने गरी निर्वाचन प्रचारलाई तिब्रता दिएको छ । जसको लागी पार्टीले नगरका १३ वटै वडामा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसकेको छ ।
पार्टीको नगरको पुर्ण बैठकले अधिकारीलाई सिद्धार्थनगरमा मेयरको उमेदवारको रुपमा एकल सिफारिश गरेसंगै एमालेको माऔल पनि तातेको देखिएको छ । पुर्व उपमेयर समेत रहेका अधिकारीको उम्मेवारी घोषणा संगै अन्य दललाई उम्मेदवार चयनमा हम्मे हम्मे समेत परेको छ ।
विक्रम सम्बत २०३४ सालदेखी सक्रिय राजनीतिमा होमिएका अधिकारीले पञ्चयातकाल ताका पन्चहरुको गढ भैरहवामा छाती खोलेर राजनीत िगर्ने योद्धा भएको उनका समकक्षी बताउंछन् । बहुदल आउनुभन्दा अगाडी पन्चहरुको विगविगी भएकै समयमा भैरहवाको प्रहरी टोलमा रहेको पञ्चहरुको विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रबादी विद्यार्थी मण्डलको बोर्ड ब्यानर फयाकेर पञ्चहरुलाई थर्कमान गराएका अधिकारीको उम्मेदवारीसंगै पुर्व पञ्चहरु समेत यतिबेला भैरहवामा थर्कमान भइरहेका छन् ।
एक जना पुर्व पञ्च नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने “हरि अधिकारी वास्तवमा भैरहवाको जिउँदो मान्छे हो । त्यति बेला हामीले भैरहवामा जे भन्यो त्यहि हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा समेत खुलेर आफ्ना कुरा राख्ने र गलतलाई गलत भन्ने व्यक्ति हो । पार्टी जे भएता पनि उसको उमेदवारीले भैरहवामा धेरै आशा जगाएको छ । ”
बहुदल पश्चातको २०४९ सालको स्थानिय निर्वाचनमा सिनपा ८ को वडा अध्यक्षमा अत्याधिक मतले निर्वाचित भएका थिए अधिकारी । त्यतिबेला नगरको मेयरमा आदित्य नारायण कसौधन एमालेबाट उठेता पनि पराजित भएका थिए हाल उनी व्यवस्थापिका संसदको सदस्य छन् ।
जुझारु, स्पष्ट र हक्की स्वाभावको अधिकारीले ०५४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा उपमेयरमा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । अहिले सम्म कुनै पनि आर्थिक तथा नैतिक विवादमा नपरेका अधिकारी नगरका सबै जसो घर घरमा पुगेका छन् । मान्छेहरु मर्दा पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने अधिकारी एमालेको उमेदवार भएता पनि भैरहवामा सबै दलका साझा उमेदवार बन्नेमा पनि धेरैले विश्वास गरेका छन् ।
अखिल पाचौंबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका अधिकारी एमालेको वडा अध्यक्ष, नगर सचिव, क्षेत्रीय इन्चार्ज हुदैं ३ कार्यकाल जिल्ला सदस्य समेत निर्वाचित भएका छन् । हाल रुपन्देही एमालेको जिल्ला सदस्य रहेका अधिकारी रुपन्देही जिल्लामा हरेक तहमा २ वा २ भन्दा बढी उमेदवारको सिफारिस भइरहदा उनी सिद्धार्थनगरमा एकल उमेदवारको रुपमा आएका छन् ।
डा. रामप्रसाद बस्यालको प्रस्तावमा अधिकारी सिद्धार्थनगरबाट मेयरमा एकल उमेदवारको रुपमा आएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासंगै सिद्धार्थनगरमा डा. बस्याल र अधिकारी दुबै जनाले मेयरको उमेदवारी बन्ने चर्चा चलिरहदा डा. बस्यालले अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेसंगै एमाले सिद्धार्थनगरमा अभुतपुर्व एकता देखिएको एमालेका नेता भरत कुमार पोखरेलले बताए । पोखरेलले भने “इतिहांसमै सिद्धार्थनगरमा एमालेको अभुतपुर्व एकता देखिएको छ । यो एकताले एमालेको मेयर उपमेयरसंगै सबै वडामा जितको सुनिश्चिता कायम गरेको छ । किनकी कार्यकर्ता अत्यन्तै खुसी र उत्साहित देखिएका छन् । ”
भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनसिलतालाई आफ्नो चुनावी नाराको प्रमुख मुद्धा बनाउने गरी चुनावी रणनीति र कार्यनीतिमा जुटेका अधिकारी राजनितीक ईतरका विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा पनि सक्रिय छन् ।
विक्रम सम्बत २०१७ सालमा बुवा जीवलाल अधिकारी र माता यमकला अधिकारीको कान्छो सुपुत्रको रुपमा जन्मिएका अधिकारीका जेठा दाजु भिमराज अधिकारी, माहिलो खडानन्द अधिकारी र साहिलो चन्द्रकान्त अधिकारीहरु पनि रुपन्देहीका प्रतिष्ठीत उद्योगी व्यवसायी हुन् ।
खरो र कडा स्वाभावका अधिकारीको मेयरमा उमेदवारी संगै एमालेभित्र अन्र्तघात हुने विगतको आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला पनि स्वतः सकिने देखिएको छ । कतै केही बद्मासी भएको थोरै प्रमाण पाएमा पनि तत्काल पेश हुने एक्सन ओरियन्टेड अधिकारीलाई अन्य दलका युवाहरुको पनि सक्रिय साथ रहने देखिएको छ ।
लुम्बिनी इट्टा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुदैं हाल इट्टा व्यवसायी महासंघको द्वितीय उपाध्यक्ष रहेका अधिकारी कम्युनिष्ट भएता पनि धर्ममा विश्वास राख्ने हुदां भैरहवा क्षेत्रका शिवमन्दिर, नारायणस्थान मन्दिर, दुर्गा मन्दिरको व्यवस्थापन समितिमा समेत जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका छन् । संस्कृति विद्याश्रमको उपाध्यक्ष, लिलाराम माविको सदस्य जस्तो जिम्मेवारी पुरा गरेका अधिकारी सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सघको सदस्य समेत हुन् ।
अधिकारी मेयरको उमेदवार भएपछि भैरहवामा राजनितीक तरंग पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेसंग तालमेल गरेर सधै मौकामा चौंका हान्दै आएको राप्रपा यतिबेला मुर्छित अवस्थामा छ । ०५४ सालको निर्वाचनमा पनि एमालको बुई चढेर मेयर पड्काएको, पछिल्लो संविधानसभामा पनि एमालको आन्तरीक सहयोग कै कारण सांसद जितेको राप्रपा अहिले के गर्ने के नगर्ने भन्ने परिस्थीतिमा पुगेको छ ।
अधिकारी मेयरबाट ब्याक नहुने उमेदवार भएपछि पुर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले माओवादी केन्द्रसंग तालमेल गर्ने गरी प्रयास थालेको छ । सिद्धार्थनगरमा राप्रपाको निर्विकल्प मेयरका उम्मेदवार सागर प्रताप राणाले माओवादी केन्द्रलाई उपमेयर दिएर मिलाउन खोजेको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रले फैज अहमद , मनिस कुमार जोसी र कमला थापामध्ये एकजनालाई मेयरमा उठाउने गरी पार्टीको माथिल्लो तहमा सिफारिस गरिरहदा राणाले माओवादीका कमला थापा र फैज अहमद मध्ये एकजनालाई उपमेयरको रुपमा उमेदवार बनाई माओवादीसंग तालमेल गर्ने प्रयास माथिल्लो स्तरबाट पनि थालेका छन् । राणाका सहपाठी राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद तथा पाटिका प्रभावशाली नेता दीपक बोहराको गृह नगर समेत रहेको सिद्धार्थनगरमा कांग्रेसको मत सबैभन्दा अधिक रहेको बुझिन्छ । अन्य ठाउमा नभए पनि सिद्धार्थनगरमा राप्रपा र माओवादी केन्द्रको तालमेल गराउन सिद्धार्थनगरका समेत बासिन्दा समेत रहेका पन्चायतकाल देखी हालीमुहाली गर्दै आएका पुर्व गृहमन्त्री निरन्जन थापा, हालका आपुर्ति मन्त्री दिपक बोहरा, पुर्व मन्त्री प्रकाश चित्रकारहरु माओवादी हेडक्वार्टरसंग निरन्तर छलफलमा रहेको बुझिएको छ । यता नेपाली कांग्रेसभित्र उमेदवार छनौटमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेसबाट मेयरकालागी जिल्ला कोषाध्यक्ष दीपक क्षेत्री न्यौपाने , जिल्ला सदस्य ओमकुमार श्रेष्ठ, पुर्व नगर सभापति सुरेन्द्र जंग थापा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, नगर सभापति दीलिप धिताल, गोपालराज भण्डारी, क्षेत्रीय सभापति मातृका यादव आकांक्षीको रुपमा प्रस्तुत हुदैं नेता कार्यकता भेटघाटमा लागेका छन । न्यौपाने ०५४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा समेत पार्टीबाट मेयरका उमेदवार थिए । यसैगरी ओम श्रेष्ठ नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष छदा नेपालभरीका शाखाबाट उत्कृष्ट सभापतिको सम्मान पाएका व्यक्तित्व हुन् ।
प्रधानमन्त्रीद्धारा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव
राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डामा कुनै सम्झौता हुदैन – कमल थापा